आजको दिन तपाइको कस्तो बित्दैछ ? हेर्नुस् राशिफल – Naulo News|online news|online news nepal
Home/समाज/आजको दिन तपाइको कस्तो बित्दैछ ? हेर्नुस् राशिफल
आजको दिन तपाइको कस्तो बित्दैछ ? हेर्नुस् राशिफल
वि.सं २०७५ साल असार २६ गते, मंगलबार। इश्वी सन् २०१८ जुलाई १० तारिख। नेपाल संवत् ११३८ तछलागा। आषाढ कृष्णपक्ष। तिथि- द्वादशी, १५ः३८ बजेउप्रान्त त्रयोदशी।
प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ भने मनग्गे आम्दानी बढ्नेछ। उद्योग र व्यापारमा
अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। नयाँ योजना अघि बधाउन हतार नगर्नुहोला। रोकिएका काममा भने दोहोर्याएर प्रयत्न गर्ने बेला आएको छ। सम्भावना कम देखिएका काममा पनि परिस्थितिले उपलब्धि दिलाउन सक्छ।
पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ र पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्, मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। शत्रु र रोगबाट भने सजग रहनुपर्ला।
अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। अरूको भरपर्दा धोका हुन सक्छ। मिहिनेत गर्दा नतिजा सकारात्मक हुनेछ। प्रयत्न गरेका काम सम्पादन हुनेछन्। अभिभावक तथा शुभचिन्तकहरूले राम्रो साथ दिनेछन्।
सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ। विशेष उपहार हातलागी होला।
aaja ko rashifal
श्रीमानले दोस्रो विवाह गर्न नमन्दा श्रीमतीले गरिन आत्महत्या !
फेरि पनि सरकारले मिलायो मृतकको संख्या, एकैदिन ८२ जना थप्यो
माटोको डिजिटल नक्सा तयार गर्ने नेपाल एसियामै पहिलो